Amụba ndụ ngwaahịa - Best amụba Ifriizi Mịrị Food
Amụba ndụ ngwaahịa
Nkume a Comment	/ kacha mma ifriizi Fikiere nri, eme nke ọma ifriizi Fikiere nri / site Admin
Iri nri nke ọma bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-achọ ime taa. Dị nnọọ n'ihi na ị chọrọ iri nri ahụ nri apụtaghị na ị na-enwekwu oge. Ị na-ahụ onwe gị na-achọ nri abalị echiche, nke ga-agụnye ngwa Ezi ntụziaka na-abụ mgbe nile ike. Ọ dị mfe ịchọta efere ị ga-achọ ịme ugboro ugboro.
N'agbanyeghị ụdị nri ị masịrị iri, ị nwere ike ịchọta echiche nri nke ga-egboro mkpa gị. Ihe niile dị, site na nri ngwa ngwa iji nweta nri na tebụl ruo mkpụrụ osisi dị mma, nri wdg. Naanị ihe ị ga-eme bụ ikpebi ndị ị ga-ebu ụzọ nwaa.
I nwedịrị ike ịchọta ezigbo nri abalị maka onye anaghị eri anụ. Enwere ezigbo ezigbo nri dị mma ịhọrọ; ọbụna ndị hụrụ anụ n'anya nwere ike ịhọrọ ịnwale efere ndị a site n'oge ruo n'oge. Ọbụna ka mma, dị ka ọtụtụ efere gụnyere anụ na protein, nri ọka, ozigbo osikapa nduku iberibe wdg. na-enye a nkenke nchịkọta nke ihe na-eme nke ọma ngwaahịa.
Mixed mkpụrụ osisi (strawberries, bluuberi na ube)
N'ezie, mkpụrụ osisi ọ bụla ị ga - agwakọta ngwa ngwa dị mma. A tomato bụ ezigbo isi mmalite nke eriri na antioxidants. Maka mma, ị nwedịrị ike ịzụta nnukwu akpa nke mkpụrụ osisi oyi kpọnwụrụ ma bulie akụkụ achọrọ n'ụtụtụ ma ha kwesịrị ịdị njikere iri n'oge ụtụtụ..
Carọt bụ ezigbo ihe na-akpata eriri na vitamin A. Uwe a na-acha ọkụ ọkụ adịghị mma dị ka iri karọt, ma ọ bụ naanị obere ego na-enye mmụba ahụ iji mee ka ọ dị “ekpomeekpo” “. Aga m aga ebe ana-azu umuanu n’ihi na, n'uche nke m, ebe ana-azu umuanu nwere abuba nwere uto di egwu … naanị debe ya 2 tablespoons ma ọ bụ obere.
Ose akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Odo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ezigbo nri crunchy, inye ezigbo eriri na ụfọdụ nke farmhouse ihendori na-agbakwunye ekpomeekpo na-enweghị ọtụtụ ọjọọ mmetụta. Naanị debe ihendori ahụ / ihendori ka 2 tablespoons ma ọ bụ obere.
Kukumba na-emeju agụụ nke crunchy na ezigbo isi iyi nke vitamin. Gbalia hummus jiri obere zing ọzọ, dị ka dil hummus, iji mejuo agụụ nnu.
Scrambled akwa mix
Ọ bụ okike nri zuru oke. Akwa ọkụkọ, nke mmadu na-erikari, na-kwajuru na protein na choline, nke dị mkpa na mmepụta amino acid dị mkpa. O nwere ọtụtụ vitamin, dị ka vitamin A, B2, B6, B9 na B12, na mineral dị ka calcium, site na potassium. Akwa nkochi nwere vitamin A niile, D na E. Mgbe akwa na-ata akwa, ha na-enye aru ahu ume na ume.
Ọka dị ka osikapa, ọka bali, ọka wit na ọka bụ nri ndị bụ isi n'ọtụtụ mba. A na-ekewa ha dị ka ọka, ọ bụkwa mkpụrụ akụ kachasị mkpa n'ụwa, ya na oke protein. Oats bu ọka di iche-iche nke juputara na protein. A na-enye nri nri Oat kacha mma n’oge nri ụtụtụ ka ha na-enye ike zuru ezu maka ụbọchị ahụ.
Walnuts dị mma mgbe niile. Ọtụtụ mkpụrụ bụ ezigbo ihe na-enye vitamin B2, E ma nwee akara mineral dị ka magnesium, site, ọla kọpa na potassium. Raw mkpụrụ bụ ndị bara ọgaranya na protein, folic acid na eriri. Ukpa, ma oburu na esighi ya, a na-ahụta ka ahụike, jiri okpukpu abụọ karịa antioxidants dị ka mkpụrụ ndị ọzọ.
Mkpụrụ osisi dị oke ọnụ ahịa maka ụmụ mmadụ n’ihi na ha bụ isi iyi mmiri na ezigbo eriri. Ọ bụkwa ihe okike sitere na vitamin C. Ọtụtụ mkpụrụ osisi dịkwa ọgaranya na protein, tinyere unere, apụl, anyụ, mango, piich, oroma, cherị, jackfruit na oliv. Iji mee ka ahụ gị na-edozi ahụ na protein, ị nwere ike itinye mkpụrụ osisi ndị a na nri gị. Ta ụfọdụ n'ime mkpụrụ osisi ndị a maka nri nri ga-enyekwa gị protein na-enye ahụike.
Akwukwo akwukwo akwukwo di elu na protein, obere abụba na obere kalori. Ha nwekwara vitamin C, lutein, carotenoids, folic acid na vitamin K. Ha bara ọgaranya na calcium, ígwè na eriri nri. Akwụkwọ nri protein dị elu nwere akwụkwọ nri, brọkọlị, kale na letus.
Mmiri ara ehi mozzarella
Kuki ga-enyere aka gboo agụụ a maka carbohydrates. Kuki ọka zuru oke nwere eriri na antioxidants. Na mgbakwunye na uru nke vitamin na protein na ngwaahịa mmiri ara ehi, chiiz ga-eme ka afọ ju gị ogologo oge ma gbochie gị iri nri mgbe mgbe.
Edamame bu ezigbo uzo eji eme ihe na protin. Ikwesiri ịchọta ha na agwaetiti nri nri nke nnukwu ụlọ ahịa. Mee ka ha ju akpa Sanwichi ma hichaa ya ma rie ya dika nri. Maka ekpomeekpo, tinye nnu nke nnu nnu ma kpopu ya n’ime akpa.
Almọnd na mịrị
Ọ bụ ngwakọta zuru oke nke ụtọ na crisp / nnu. Almọnd nwere abụba, ma abụba ya dị mma. Mịrị bụ ezigbo isi iyi nke eriri. Gbalịa ịgbakwunye naanị nnu nnu nnu iji tinye obere ekpomeekpo na almọnd.
Shredded Monterey Chiiz
N'ezie, nri a nwere ọtụtụ ọghọm (abụba, cholesterol, sodium), ma ọnụọgụ ndị ahụ dị ntakịrị na ndị na-edozi ahụ ga-egbo gị ogologo oge iji zere agụụ na-agụ n'ọdịnihu. Ọ bụ nri dị mma ma e jiri ya tụnyere akpa nke Doritos.
Mpekere Fuji Apple
Apụl bụ ezigbo eriri na vitamin C. Gbalịa idobe anụ ahụ apụl n'ihi na ọ nwere ọtụtụ vitamin C. Ahụekere ahụekere nwere ọtụtụ protein na-eme ka ọ dị ogologo. Naanị edebe karịa 1-2 tablespoons.
Ready to become a Thrive Life consultant? Click here to join or to learn more about the commissions andmonetary benefits click here. I nwekwara ike zụọ anyịahụike na nri na-edozi ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ngwaahịa ebe a ma ọ bụ site na ịlaghachi n'ụlọ anyị na ịmụtakwu iheEme nke ọma Ifriizi a mịrị amị nri.
Ajuju anyi na-enweta mgbe niile – Ego ole ka ndị ọkachamara na-eme nke ọma?